Home > Travel Europe > Erite Europe Best Food Places
Europe dị ka kọntinent dị iche iche, Europe na-eweta ihe ọ bụla ụdị njem - atọ ụtọ ata aru gụnyere. Ma ebe ga gị uto buds ike ụtọ kasị? What meal pic will have gị Instagram egwu elu 100 na nke amasị? Kwụsị na-eche ma na-amalite munching. Erite Europe Best Food Places na anyị n'elu họpụta mmadụ!
1. Europe nke Best Food Places – Greece
Erite Europe Best Food Places na Greece. Ònye nwere ike omume enweghị mmasị nri-jupụta filo achịcha dị iche iche? Greek nri siri ike nsogbu na ya ma eleghị anya nwere ihe na-eme na ha akụkọ ihe mere eme. The mba culinary omenala na-atụle ga-elekọta 4,000 afọ. I nwere ike iti ahụmahụ na ọ bụ ya mere na ọ bụ Europe nke Best Food Places.
The oge ị na-ahapụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ị na-ama jụrụ na otu n'usoro nke ịtụnanya nhọrọ. First ihe mbụ. Rent a igwe. nzọụkwụ 2. Gbaa ịnyịnya ebe gị imi na-ewe gị! Europe nke Best Food Places nọ Amsterdam maka a dịgasị iche iche nke ihe ndị mere. Ọnweghị ihe mmefu ego gi, e nwere ihe maka onye ọ bụla! Ị nwere ike gaa na otu izu na subsist nanị anya nke n'okporo ámá emeso na ahịa ụgbọ.
Amaghị ebe na-amalite? Nweta a ngwa ngwa iwebata ka Amsterdam nri idaha na a efere nke gwọrọ azụ asa site na otu nke obodo ọtụtụ azụ asa adọkpụ ma ọ bụ azụ asa ahia. Ọ bụrụ na ọ na-esiri azụ ị na-achọsi ahụ na-agbalị kibbeling. Rojiwere na miri-eghe ọcha azụ eje ozi na a Mayonezi ihendori. maka eji megharịa ọnụ. Pop n'ime ihe ọ bụla nke 100 si of bakeries.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe savory, ị ga-abụ obere of nhọrọ maka cheese. Ha na-n'ụzọ nkịtị na okporo ámá niile. Our favorite? A sirop waffle ugbua ka enwere abụọ mkpa waffles, miri e ghere eghe na gooey ịdị mma n'ime na topped oyi na powdered sugar.
Olee otú anyị ọbụna na-eche nke na-akpọ Europe Best Food Places na-agụnye ọ bụghị Italy! Ọ bụ n'ebe a European mba ọzọ iconic nri? Nnọọ, carbs! Pizza na pasta bụ na onye ọ bụla na-aga depụta! Dị na-echeta na ọ bụla mpaghara nwere ha ọpụrụiche na bụ oge dabere.
4. Europe nke Best Food Places – France
Lyon, mara dị ka France's Gọọmet isi obodo dịtụbeghị ọzọ inweta, na a ụgbọ oloko na na London na TGV jikọrọ ga whisk gị Paris ma ọ bụ Marseilles na n'okpuru awa abụọ. Bụ gị uto buds mmetụta adventurous? Good! Anyị nwere a na-emeso gị! Ịnwale obodo ọpụrụiche; onu ogbom sapper (breaded afọ anụ), mgbe rụchaa ya anya na a gara mgbe-ewu ewu Croix-Rousse district ole na ole na-aṅụ si na obodo.
Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime Europe Best Food Places ma ọ dịghị abịa na-enweghị a ịdọ aka ná ntị: "Entrée" ike ga-eji n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa na-pụtara "isi efere,"Ma na French, ọ pụtara n'ezie "appetizer."Ya mere, na-arapara na" entrée "maka appetizer na" plat "maka isi nri, na ị ga-esi na n'akụkụ nke ọzọ na a full afo na a akwa ahụmahụ.
London nri idaha bụ ka akụkụ nke Europe na Best Food Places ruo mgbe anyị maara ihe ga-esi na-Brexit. London idaha bụ a Kakemish-Mash nke omenala culinary ọhụụ na oge a na ọhụrụ. Ọ dịghị nri-centric njem London zuru ezu enweghị dịkarịa ala otu-n'ehihie, tii, a Sunday anụ na obi ụlọ mmanya so a pint of bitters ma ọ bụ ụfọdụ takeaway azụ na ibe site na otu nke obodo ọtụtụ 'chippies.’ Ọ bụrụ na Michelin-starred esi ndị ọzọ gị ihe, mgbe ị ka na-nri ebe. E nwere ugbu a na ise ụlọ oriri na ọṅụṅụ na UK nke jide atọ Michelin kpakpando. The Waterside Inn, Alain Ducasse na Dorchester, The Araki, Restaurant Gordon Ramsay, na abụba Duck.
Bụ gị uto buds jijiji? Na-afo ụzụ na atụmanya? AKWỤKWỌ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè njem gị culinary heaven nke oke na-enyemaka nke SaveaTrain. Book na n'okpuru 3 nkeji na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/experience-europes-best-food-spots/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)